WARARKA – Page 3 – Qaran24
lix dhacdo oo lagu xasuusan doono Sanadka 1-aad oo ay jirsatay dowlada Farmaajo (Aqri)
Waxaa inta badan goobaha lagu shaaho ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka laga hadal hayaa caqabada Siyaasadeed ee lasoo daresay dowlada Somalia tan iyo markii 8 February la doortay Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo.
Deg Deg: Meydad Fara Badan oo Laga Soo Saaray Xeebaha Ku Dhaw Dalka……………..
Warar haatan soogaaray QARAN24.COM Ayaa Sheegaya in Meydadka ugu yaraan 20 qof oo muhaajiriin ah laga soo saaray badda xeebaha Melilla oo ah dhul yar oo ku yaalla Spain balse ku dhaw dalka dariska la ah Moroko.
Kooxaha samtabixinta ee waddanka Moroko ayaa soo saaray meydadka kaddib markii shaqaalaha rakaabkii saarnaa doonta ay ku daateen badda.
Waxaa loo maleynayaa dadkaan inay rajeynayeen inay gaaraan dalalka Yurub iyaga oo doonayay inay ku xirtaan xeebta Melilla, inkasta oo digniino ah inay dhicikaraan dabeylo xooggan ay ku wargaliyeen maamulka gobolka.
Gobolkaan Melilla, ayaa ah goobta ugu weyn ee muhaajiriinta shaqa doonka ah ama magangalya doonka ay uga gudbaan dalalka Yurub.
Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in qaxooti aad u tira badan oo soo gaaray Spain ay usii gudbeen dalka Talyaaniga.
Tirada qaxootiga ee meydadkooda lasoo helay toddobaadkaan markii laga soo tago, muhaajiriin kale oo gaaraya 243 ayaa dhintay ama lawaayay sanadkaan kaddib markii ay isku dayeen inay uga gudbaan badda Mediterranean-ka dalalka Yurub.